INkosana Albert, uMyeni waseStatshi waseJamani oyiNtlabathi
Isikhulu saseJamani saseSylish and Intelligent, sinobukhulu becala eBrithani
INkosana Albert wayelungu lobukhosi baseJamani abatshata i- Queen of Britain yaseVrithani kwaye bancedisa ukuvelisa ubugcisa bokutsha kunye nesitayela somntu.
UAlbert, owayezalelwe njengenkosana yaseJamani, wabonwa ngabaseBrithani njengomntu ohlala kwiBritish. Kodwa ingqiqo yakhe, inzala kwimigqaliselo emitsha, kunye nokusebenza kwimicimbi yezopolitiko yamenza umntu ohloniphekileyo eBrithani.
UAlbert, ngubani ekugqibeleni owayephethe isihloko esithi iPrince Consort, waziwa ngokuba nomdla ekuncediseni uluntu kwiminyaka ye-1800. Wayeyindoda enkulu yezobugcisa ezinkulu zehlabathi, i- Exhibition Great ye-1851 , eyabangela ezininzi izinto eziza kuluntu.
Wafa, ngokukrakra, ngo-1861, eshiya uVictoria umhlolokazi ogqwesileyo isambatho saba ngumnyama wokulila. Ngaphambi nje kokufa kwakhe waba nendima ebalulekileyo ngokuncedisa ukutshabalalisa urhulumente waseBrithani kwimfazwe yempi ne-United States.
Ubomi bokuqala bukaPrince Albert
UAlbert wazalwa ngo-Agasti 26, 1819 eRosenau, eJamani. Wayenguye unyana wesibini weDuke waseSaxe-Coburg-Gotha, kwaye wathandwa kakhulu ngumalume wakhe uLeopold, owaba ngukumkani waseBelgium ngo-1831.
Njengomntwana osemncinci, uAlbert waya eBrithani waza wadibana neNkosana Victoria, owayengumzala wakhe kunye no-Albert. Babenobungane kodwa iVictoria yayingathandabuzeki kakhulu ngumntwana omncinci uAlbert, owayengenamahloni kwaye engenangxaki.
AbaseBritani babenomdla wokufumana indoda efanelekayo kumntombazana omncinci owayeza kunyuka etrone. Isiko sezopolitiko saseBrithani sagqiba ukuba inkosi ayikwazi ukutshata nomfaki-nkulu, ngoko umgcini waseBrithani wayengaphandle kombuzo. Umyeni waseVictoria wayeza kufuneka avele ebukhosini baseYurophu.
Izihlobo zikaAlbert kwilizwekazikazi, kuquka uKing Leopold waseBelgium, ngokuyinhloko yaqondisa le ndoda ukuba ibe ngumyeni waseVictoria. Ngowe-1839, iminyaka emibini emva kokuba uVictoria abe nguKumkanikazi, uAlbert wabuyela eNgilani waza wacela umtshato. U kumkanikazi wamkela.
Umtshato ka-Albert noVictoria
U-Queen Victoria watshata no-Albert ngoFebruwari 10, 1840 eSt. James Palace yaseLondon. Ekuqaleni, uluntu lwaseBrithani kunye ne-aristocracy bacinga ngo-Albert. Ngoxa wayezalelwa ebukhosini baseYurophu, intsapho yakhe yayingabutyebi okanye inamandla. Yaye wayehlala ebonakaliswa njengomntu otshata ngokuzibiza okanye ngemali.
U-Albert wayenengqiqo kwaye wayezinikele ekuncedeni umfazi wakhe ukuba abe yinkosi. Kwaye emva kwexesha waba yinto efunekayo kukumkanikazi, wamcebisa ngemicimbi yezopolitiko kunye nezopolitiko.
UVictoria noAlbert babenabantwana abalisithoba, kwaye ngeengxelo zonke, umtshato wabo wawonwabile kakhulu. Baye bathanda ukuba kunye kunye, ngamanye amaxesha baqhelanisa okanye balalele umculo. Intsapho yasebukhosini ibonakaliswe njengentsapho efanelekileyo, kwaye ukubeka umzekelo wabantu baseBrithani babonwa njengenxalenye enkulu yendima yabo.
U-Albert wanikela inxaxheba kwisiko esaziwayo namhlanje. Intsapho yakhe yaseJamani yayiza kuzisa imithi endlwini yeKrismesi, kwaye yayizisa isiko eBrithani.
Umthi weKrismesi eWesternsor Castle wakha imfashini eBrithani eyayiqhutyelwa eMelika.
Umsebenzi wePrince Albert
Kwiminyaka yokuqala yomtshato, u-Albert wayecaphukile ukuba uVictoria akazange amnike imisebenzi awayecinga ngayo. Wabhalela umhlobo ukuba "yindoda kuphela, kungekhona inkosi endlwini."
UAlbert wazibandakanya neminqweno yakhe emculweni nasekuzingeleni, kwaye ekugqibeleni wayebandakanyeka kwimicimbi ebalulekileyo yokuma.
Ngo-1848, xa ezininzi zaseYurophu zatshukunyiswa yintlangano, uAlbert waxwayisa ukuba amalungelo abantu basebenzayo kufuneka acingisise. Wayelizwi eliqhubela phambili ngexesha elibalulekileyo.
Ndiyabulela umdla ka-Albert kwi teknoloji, wayeyintloko ebalulekileyo kuMboniso Omkhulu we-1851 , umboniso omkhulu wezenzululwazi kunye nezixhobo ezenziwe kwi-edifice entsha e-London, i-Crystal Palace.
Injongo yalo mboniso yayikubonisa ukuba uluntu lushintshwa njani ngcono ngezesayensi kunye nobuchwepheshe. Kwakuyimpumelelo enkulu.
Kuwo wonke ama-1850 uAlbert wayehlala echaphazeleka kakhulu kwimicimbi karhulumente. Wayeyaziwa ngokubhikisana noMninimzi uPalmerston, osombusazwe obalulekileyo waseBrithani owayekhonza njengongqongqoshe wangaphandle kunye nongqongqoshe.
Phakathi ne-1850s, xa uAlbert walumkisa ngeMfazwe yaseCrimea , abanye baseBritani bammangalela ngokuba ngu-pro-Russian.
UAlbert Wanikwa iGosa leRoyal of Prince Consort
Ngoxa uAlbert ebengumntu onamandla, wayengenalo, ngenxa yeminyaka eyi-15 yokuqala yomtshato kuMongameli uVictoria, wathola isihloko sobukhosi ePalamente. UVictoria wayephazamiseka ukuba isikhundla sakhe somyeni asizange sichazwe ngokucacileyo.
Ngo-1857 isihloko esipheleleyo sePrince Consort ekugqibeleni sanikwa u-Albert ngu-Queen Queen.
Ukufa kwePrince Albert
Ngasekupheleni kwe-1861 uAlbert washaywa ngumkhuhlane we-typhoid, isifo esasiyingozi kakhulu kodwa ingaqhelekanga sibulawe. Umkhwa wakhe wokusebenza ngokugqithiseleyo unokumnciphisa, kwaye wahlupheka kakhulu kwesi sifo.
Ithemba lokuba aphinde aphuluke, kwaye wafa ngo-Disemba 13, 1861. Ukufa kwakhe kwaxhatshazwa kuluntu lwaseBrithani, ngokukodwa njengoko wayeneminyaka engama-42 ubudala.
Ekufeni kwakhe, uAlbert wayebandakanyekile ekuncediseni ukunciphisa i-United States malunga nesiganeko elwandle. Umkhumbi wemikhosi waseMerika wawuyekile umkhombe waseBrithani, iTrent, waza wabamba ama-ambassari amabini avela kurhulumente we-Confederate ngexesha lokuqala kweMfazwe YaseMelika .
Abanye eBrithani bathatha isenzo seNayile saseMerika njengento ehlambalaza kwaye bafuna ukuya empini ne-United States. UAlbert wayebheka iUnited States njengesizwe esinobungane eBrithani kwaye wanceda ngokukhawuleza ulawulo lwaseburhulumenteni waseBrithani ekubeni yintoni eyayiba yimfazwe engenakuphikisa.
INkosana Albert ikhunjulwe
Ukufa komyeni wakhe kwabhubhisa uMongameli waseVictoria. Intlungu yakhe yayibonakala ingqongqo nakubantu bexesha lakhe.
UVictoria wayehlala njengomhlolokazi iminyaka engama-40 kwaye wayehlala ebonakala egqoke umnyama kuphela, owamnceda ukudala umfanekiso wakhe njengomntu okhuphayo kwaye oqhelekileyo. Enyanisweni, igama elithi Victorian lithetha ngokunyaniseka okuyingxenye ngenxa yenguqu kaVictoria njengomntu onzima.
Akukho mbuzo ukuba uVictoria wayemthanda kakhulu uAlbert, kwaye emva kokufa kwakhe, wahlonishwa ngokubanjelwa kwi-mausoleum ecacileyo kwiFrogmore House, engekude ne-Windsor Castle. Emva kokufa kwakhe, uVictoria wahlala ecaleni kwakhe.
I-Royal Albert Hall eLondon ibizwa ngokuba yiNkosana uAlbert Albert, kwaye igama lakhe lixhomekeke kwiLondon yase-London nase-Albert Museum. Ibhuloho ewela i-Thames, apho uAlbert wasikisela isakhiwo ngowe-1860, ubizwa ngokuba nguye.
Iimpawu zeMark Twain eziya kukushiya ulwimi oluboshwe
Ukuxhatshazwa kwemiGaqo eqhelekileyo kunye neMaminerali
Abafazi Abamnyama abaye baqhubela uMongameli we-United States
Izinto zeCawa zeLDS zingathengwa kwaye zifikelele kwiindlela ezininzi
Funda ukuguqulelwa kweRammstein's Top Hits